Nlereanya oche ịgba ọsọ n'ogbe 1501-4 Onye nrụpụta na onye na-ebubata |Ụba abụọ
Agba:Black + Red + White / Black + Blue + White
Enwere m ike ị nweta Sample tupu ịtụ ọtụtụ?Kedu maka ebubo ndị ahụ?
Ee, n'ezie, anyị na-anabata sample iji nwalee na-elele quality.New ahịa kwesịrị ịkwụ ụgwọ sample ego.Ndị ahịa ochie na-eri ihe karịrị ugboro abụọ anaghị achọ ego nlele, naanị ihe nlele site na ịnakọta ibu.
Ogologo oge ole ka akwụkwọ ikike nke ngwaahịa gị dị?
Kedu oge ịkwụ ụgwọ gị?
ugwo T/T, L/C.
Gịnị bụ ọtụtụ ahịa anyị?
European, USA, Mid-East, Asia bụ ọtụtụ ahịa anyị.
N'ịgbaso ụkpụrụ gị nke "ịdịmma, enyemaka, arụmọrụ na uto", anyị enwetala ntụkwasị obi na otuto sitere n'aka ndị ahịa ụlọ na nke mba ụwa maka China Gold Supplier for China Factory Direct Wholesale Ergonomic Hot Sale Leather Office Racing Gaming oche na Footrest, ngwaahịa anyị nwere. aha ọma sitere n'ụwa dị ka ọnụ ahịa ya kacha asọmpi yana uru kachasị mma nke ọrụ ire ere nye ndị ahịa.
China Gold Supplier maka China ebuli oche, Ịgba Cha Cha oche, Ugbu a, na mmepe nke internet, na omume nke internationalization, anyị na nwetara kpebiri ịgbatị azụmahịa na esenidụt ahịa.Site n'atụmatụ nke iwetara ndị ahịa mba ofesi uru karịa site n'inye ndị mba ọzọ ozugbo.Ya mere, anyị agbanweela uche anyị, site n'ụlọ ruo ná mba ọzọ, na-atụ anya inye ndị ahịa anyị uru karị, na-atụ anya ohere ọzọ ịme azụmahịa.
Nke gara aga: Ihe nlere oche Gamer 1501-3
Osote: Ihe Nlereanya Economy oche 1709-O